» महजोडीको राष्ट्रवादी सन्देश, नेपालीलाई आत्मनिर्भर हुने चार मन्त्र
महजोडीको राष्ट्रवादी सन्देश, नेपालीलाई आत्मनिर्भर हुने चार मन्त्र
२ पुष २०७६, बुधबार ०६:५७
चर्चित हाँस्य कलाकारद्वय हरिवंश आचार्य र मदनकृष्ण श्रेष्ठ समसामयिक-सन्देशमुलक चलचित्र र टेलिचलत्रिका कारण चर्चित छन्। कलाक्षेत्रमा लामो समयदेखि प्रभाव जमाइरहेका उनीहरुले बेला बेला चलाउने सामाजिक अभियानले पनि चर्चा बटुलिरहन्छन्। आफ्ना सन्देशमुलक कलाकृतिका कारण चर्चित उनीहरुले बुधबार साँझ ६ बजे आसपास सामाजिक सञ्जालमा एउटा सन्देशमुलक सामाग्री पस्किए। राष्ट्रवासँग जोडेर सामाजिक सञ्जालमा हालिएको उक्त सामाग्रीमा नेपाललाई कसरी आत्मनिर्भर बनाउने उपाय सुझाइएको छ।
महजोडीले हालै सम्पन्न १३औँ सागमा मिलेको सफलताले नेपालीको छाती गर्वले फुलेको बताएका छन्। तर फेरि सुस्ता र कालापानीमा सीमा मिचिँदा छाती कुँडिएको पीडा पनि पोखेका छन्। ुयाद गरौँ ( हामी गरिब छौँ। तर लाचार होइनौँ। हामी कमजोर छौँ। तर कायर होइनौँ। जसरी ५१ स्वर्ण जित्दा हाम्रो छाती गर्वले फुल्छ। सुस्ता र कालापानीमा हाम्रो सीमा मिचिँदा हाम्रो छाती कुँडिनु पर्छु, महले भनेका छन्, ुविदेशीको हेपाहा प्रवृतिबिरुध्द हामी सामान्य नागरिक सीमामा गएर उभिन नसकौँला तर यो आक्रोशलाई शक्तिमा बदल्दै हामीले आत्मसम्मानको लडाँई लड्नुपर्छ।ु उनीहरुले सामाजिक सञ्जालमार्फत् दिएका चार सन्देशमध्ये पहिलोमा पेट्रोलियम पदार्थमा भारतसँग निर्भर हुन छाडेर विद्युतको प्रयोग बढाउनुपर्ने आग्रह गरेका छन्। दोस्रोमा विदेशी चलचित्रमा समय र पैसा खर्च नगर्न भनेका छन्। सँगे आफ्नै सहर बजार र रमणीयस्थल घुम्न सुझाएका छन्। महले नेपालमै हुने खेलकुद प्रतियोगिता अवलोकनमा जोड दिएका छन्। उनीहरुले सलमान खानसँग नभइ आफ्नै परिवार र प्रियजनसँग समय बिताएर खुसी साट्न आग्रह गरेका छन्। तेस्रो बुँदामा विदेशी उत्पादनको खपत घटाउन भनिएको छ।
पार्लेजीको साटो नेबिको र म्यागीको सट्टा रारा खान आग्रह गरेका छन्। महले स्याम्पु, दन्त मञ्जनसहित अन्य विलाशी सामग्री पनि नेपालमै उत्पादित प्रयोग गर्नुपर्ने अपिल गरेका छन्। ुलहराँउदो केश, टल्किएको दाँत र बासना आउने शरिर(निहुरिएको शिर भन्दा महत्वपूर्ण हुँदैनु, महले भनेका छन्। महजोडीले चौथो नम्बरमा आँगन र कौशीहरुमा भए पनि तरकारीजन्य खेती गरेर आत्मनिर्भर हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। लाखौँ घरपरिवार यो अभियानमा जोडिएमा देशकै करोडौँ जोगिने उनीहरुको मत छ। यस्तो छ महको सन्देश
१. आजैदेखि induction चुल्हो, electric केट्ली र electric geyser को प्रयोग बिस्तारै बढाऔँ। बिद्युत्मा आत्मनिर्भर हुँदै पेट्रोलियम पदार्थमा भारतमाथि निर्भर हुन छाडौँ। बिद्युतीय उपकरणको प्रयोग फाइदाजनक पनि छ।
२. बिदेशी चलचित्रहरु पैसा र समय खर्च गरिगरि नहेरौँ । त्यसले तपाँईको वा तपाँईको सन्तानको ब्यक्तित्व बिकास हुने पनि होइन। सोही रकम जोहो गरी आफ्नो शहर बजार वरिपरिका रमणीयस्थलमा वनभोज जाऔँ। आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गरौँ। वा खेलकुद प्रतियोगिताहरु (शहिद स्मारक लिग, पोखरा प्रिमियर लिग आदि) अवलोकन गरि नेपाली खेलाडीहरुको हौसला बढाऔँ। ‘सलमान खान’ हरु सँग होइन आफ्नो परिवार र प्रियजनहरुसँग समय बिताऔँ। खुशी साटौँ ।
३. विदेशी उत्पादनहरुको खपत घटाऔँ। ‘पार्ले जी’ को सट्टा ‘नेबिको’, ‘म्यागी’ को सट्टा ‘रारा’ र स्याम्पु, दन्त मञ्जन लगायत विलाशी सामग्री सकेसम्म स्वदेशी, नभए अन्य मित्र राष्ट्रका प्रयोग गरौँ । महँगो भए मितव्ययी होऔँ । लहराँउदो केश, टल्किएको दाँत र बासना आउने शरीर – निहुरिएको शिर भन्दा महत्वपूर्ण हुँदैन।
४. आफ्नो आँगन वा कौशीमा सानै परिमाणमा भए पनि तरकारीजन्य खेती गरौँ । लाखौँ घर परिवार यो अभियानमा जोडियौँ भने करोडौँ रुपैयाँ जोगिन्छ। तरकारी खेतीले तपाँईको मानसिक स्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव पनि पार्नेछ । हामीले घर बसेरै गर्न सक्ने यी कुराहरु गर्‍यौँ भने हाम्रै अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान गर्न सक्नेछौँ । विदेशीलाई सोच्न बाध्य बनाउन सक्नेछौँ। हामीले दु:ख गरी कमाएको पैसा वा हाम्रा आफन्तजनले बिदेशमा रगत पसिना बगाई नेपाल पठाएको पैसा पुनः विदेशमै जान रोक्न सक्नेछौँ। विदेशिएका लाखौँ आफन्तजन र आफ्ना दु:खहरु सम्झिऊँ । कफिनमा फर्किएका लाशहरुप्रति बफादार होऔँ । आजैदेखि न्यूनतम सय दिनका लागि यो अभियानमा सहभागी बनौँ । सोच बदलौँ । देश बदलौँ । गरिब होइन धनी बनौँ । कमजोर होइन, शक्तिशाली बनौँ । किनकी याद गरौँ, हामी गरिब छौँ, लाचार हौइनौ। कमजोर छौँ तर कायर होइनौ ।